Saturday April 27, 2019 - 20:17:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Duqeymaha dadka badan lagu gummaadayo ee diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka geysanayaan dalka Soomaaliya ayaa waxaa markale ka hadlay siyaasiyiin katirsan dowladda Mareykanka ee uu madaxda ka yahay Donald Trump oo ah hoggaamiye Cunsuri ah.
Ilhaan Cumar oo ka tirsan Golaha Congress-ka Maraykanka laganasoo doorto gobolka Minneapolis ayaa xaqiijisay in ciidamada Mareykanka ay dad badan oo shacab ah ku xasuuqeen dalka Soomaaliya iyadoo dhaleecayn kulul ujeedisay qaabka uu Trump ku wajahayo dagaalka Soomaaliya.
iyadoo wareysi siinaysay Idaacadda Codka Mareykanka laanteeda Afka Soomaaliga ayay sheegtay in ay diyaarinayaan sharci lagu joojinayo duqeymaha bahalnimada ah ee diyaarada Drone-ka Mareykanka ka geysanayaan dalka Soomaaliya.
Maamulka Donald Trump ayay ku eedeysay in uu adeegsanayo awood xad dhaaf ah oo waxyeello baahsan gaarsiinaysa shacabka Soomaaliyeeda isagoo ku marmarsiyoonaya ladagaallanka Al Shabaab.
Hay'adda Amnesty International ayaa warbixin ay bil ka hor soo saartay ku sheegtay in Mareykanku xasuuq ku hayo Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Koonfurta iyo bartamaha dalka, caddeymaha ka yimid Ilhaan Cumar oo asalkeedu yahay Soomaali ayaa banaanka soo dhigaya gabood fallada uu maamulka Trump ugeydanayo dadka Rayidka ah.